तपाईंले,पत्याउनु हुन्न होला तर केटीहरुले नुहाउँदा खेरि यस्ता कुराहरु सोच्छन – News Nepali Dainik
तपाईंले,पत्याउनु हुन्न होला तर केटीहरुले नुहाउँदा खेरि यस्ता कुराहरु सोच्छन
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र १३, २०७७ समय: २१:३३:४४
युवतीहरुलाई आफू नुहाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चिन्ताले सताउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरुले नुहाउदा आफ्नाे शरीर र कपालको बारेमा चिन्ता गर्छन् । यस बाहेक उनीहरु बाथरुमभित्र आफैसँग छिल्लिने गरेको समेत अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । केटीहरू अक्सर सम्बन्धबारे चिन्तित रहन्छन् । उनीहरू सधैं दिगो सम्बन्धको खोजीमा हुन्छन् ।
त्यसैले उनीहरू अक्सर हाम्रो स’म्बन्ध कत्तिको टिकाउ हुनेछ ? के हामी सधैं यस्तै गरेर खुसी रहन सकौंला ? आदि सोचमा हराउने गर्दछन् ।केटीहरू आफ्नो कपालबारे पनि चिन्ता गर्ने गर्दछन् । नुहाउँदा केही कपाल झर्नु सामान्य कुरा हो तर केटीहरू भने यसबारे केही बढी नै गम्भीर भइदिने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरू नुहाउँदा विभिन्न हेयरस्टाइल कस्तो लाग्दो रहेछ भनेर ऐनामा समेत हेर्ने गर्दछन् ।
Last Updated on: March 26th, 2021 at 9:33 pm